'संविधानको विरोधमा अर्को विद्रोह नहोला भन्‍न सकिन्‍न'- गण्डकी - कान्तिपुर समाचार
गण्डकी प्रदेशसभाको बैठकमा सांसदहरुले घटनाको ढाकछोप गरेको भन्दै जनार्दन शर्मा र कृष्ण थापाको विरोध गरेका छन् ।
जेष्ठ १४, २०७७ दीपक परियार
पोखरा — गण्डकी प्रदेशको छैटौं अधिवेशनअन्तर्गत बुधबारको बैठकमा बोल्ने सांसदले रुकुम हत्याकाण्डको चर्को विरोध गरेका छन् । उनीहरुले जेठ १० मा रुकुममा भएको घटना र कास्कीमा दलितलाई किरियापुत्री भवन उपलब्ध नगराएको घटनाका दोषीलाई कारबाहीको माग गरे ।
दुवै घटनाका दोषीलाई राजनीतिक आवरणमा उम्काउने चेष्टा भइरहेको प्रदेश सांसदको आरोप छ । संसद्‌मा बोल्दै हरिशरण आचार्यले रुकुम घटनाका विषयमा संघीय सांसद जनार्दन शर्माले मंगलबार संसदमा दिएको अभिव्यक्तिको विरोध गरे । ‘यस्तो बर्बर हत्या काण्डमा संलग्न वडाध्यक्ष निर्दोष छन् भनेर एक जना संघको तल्लो सदनमा कुर्लिंदै बोल्छन्,’ आचार्यले भने, ‘समाजले सामाजिक हैसियत हेर्छ, कसरी र कसको कोखबाट जन्मिएको भनेर विभेद गर्छ भने याद गर्नुस् महासय तपाईंले बनाएको संविधानको विरोधमा पनि फेरि एकपल्ट अर्को विद्रोह नहोला भन्न सकिन्न ।’
आफैंले बनाएको संविधानको आफैंले उपहास गर्ने काम भएको उनको भनाइ थियो । ‘आज सामाजिक विभेदको यो एउटा नमुना घटना होला तर हामीलाई चिन्ता के हो भने आफैंले संविधान बनाएर आफैंले उल्लघंन गर्ने !’ उनले भने, ‘वर्गसंघर्षबाट खारिएर आएको कम्युनिस्ट व्यक्तित्व तपाईंलाई लाज लाग्नुपर्ने हो ।’ उक्त घटनाको दोषीलाई बिनाछलकपट कारबाही गरी देशभर सामाजिक विभेदमा परेका सम्पूर्ण समुदायलाई न्याय दिन उनले आग्रह गरे ।
कास्कीको पोखरा–१६ बाटुलेचौरमा दलितलाई किरियापुत्री भवन उपलब्ध नगराउनेकै पक्ष एक प्रदेश सांसदले लिएको भन्दै उनले विरोध जनाए । जातीय छुवाछुतमा संलग्नलाई बिनासर्त रिहाइ गर्नुपर्ने आग्रहको विज्ञप्ति प्रदेश सांसद कृष्णबहादुर थापाले प्रकाशित गरेको प्रति पनि उनले विरोध गरे । भने, ‘एउटा दलको जिल्लाको नेतृत्वको हैसियतले निकालेको उक्त वक्तव्यलाई के भनौं ? के अझैं तपाईंहरु सामाजिक विभेद, भेदभाव र छुवाछुत गरिराख्नुहुन्छ ? यदि त्यसो गर्नुहुन्छ भने त्यो प्रवृत्ति एकदिन अवश्य पनि जनताबाट पराजित हुनेछ । दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही अगाडि बढाउन सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।'
अर्का सांसद डोबाटे विश्वकर्माले रुकुमको घटनाले सिंगो दलित समुदायलाई असुरक्षित महसुस गराएको बताए । दोषीलाई कारबाही गर्न कुनै बहानाबाजी कोहीबाट पनि हुन नहुने उनको भनाइ थियो । पोखरा बाटुलेचौरको घटनालाई ढाकछोप गर्न प्रदेश सांसदसमेत रहेका नेकपाका जिल्ला अध्यक्ष लाग्नु दुःखदायी भएको उनले सुनाए । ‘यस विषयमा मैले सांसद थापासँग कुरा गरेँ,’ उनले भने, ‘दलित अन्यायमा परेको कुरालाई तिललाई पहाड बनाइएको भन्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।’ बाटुलेचौरको घटनामा पनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेर आवश्यक कारबाही गर्न उनले माग गरे ।
मंगलबारको बैठकमा समेत सांसदले रुकुम र कास्कीको घटनामा विरोध जनाउँदै दोषीलाई कारबाहीको माग गरेका थिए ।
प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७७ २०:४६
हत्यामा आरोपमा वडाध्यक्ष जेल चलान
जेष्ठ १४, २०७७ कान्तिपुर संवाददाता
विराटनगर — एक व्यक्तिको हत्या घटनासँग जोडिएका विराटनगर महानगरपालिका १८ का वडाध्यक्ष सञ्जयकुमार साहलाई अदालतले कारागार चलान गरेको छ ।
विराटनगर १४ जतुवाका ५५ वर्षीय शमानन्द यादवको हत्या घटनामा उनी मुछिएका थिए । हत्या घटनापछि उनी फरार थिए । बुधबार जिल्ला अदालत मोरङमा आफैं उपस्थित भएका हुन् ।
मुख्य न्यायाधीश मेदनीप्रसाद पौडेलको इजलाशले साहलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको हो । हत्या घटनामा संलग्ना रहेको भनिएका वडाध्यक्ष साहसहित १० जना फरार थिए ।
गत वर्षको जेठ अन्तिम साता शमानन्दमाथि कुटपिट भएको थियो । विवाह विषयको विवादमा पिटिएका उनको असार २६ गते मृत्यु भएको थियो । मृतकका परिवारले वडाध्यक्ष साहसहितको नाम किटानी गरी प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए ।
यही घटनामा संलग्न रहेको आरोप लागेका जहदा १ का वडाध्यक्ष प्रदीचन्द्र यादव र विराटनगर १४ का दिपेश यादवलाई यसअघि नै पुर्पक्ष्ँका लागि अदालतले थुनामा पठाइसकेको छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ १४, २०७७ २०:४३